Blockchain News 27 Ndira 2018 - Blockchain News
Ndira 27, 2018 arun
Blockchain News 27 Ndira 2018
$524M Zita chakabiwa mu Hack wechiJapanese Exchange Coincheck
Japanese cryptocurrency Exchange Coincheck akasimbisa kuti $524 miriyoni zvemadhenari digitaalinen mari yave zvakabiwa-zvichida zvichiita kuti kupfuura chimwe Hack pamusoro kuchitsinhanisa, kunyange outweighing ari Mt. Gox pakakuvara 2014.
Ndicho maererano Japanese pepanhau Asahi Shimbun, iyo inotaura kuti Coincheck akati kuti vamwe 500 miriyoni vamapoka ane cryptocurrency inozivikanwa Zita, ukoshi pamusoro 58 bhiriyoni Yen, yakanga yatorwa makasitoma 'wallets.
The padanda zvino tawira pamusoro $430 miriyoni, pamwe spooked vanoita kutengesa kure Holdings dzavo anotevera nerunyerekupe ari Hack yapfuura Friday.
Coincheck ari anonzi achiri kuedza kuona hunhu kurwisa, asi akacherechedza kuti vamwe cryptocurrencies havana rinoitei. Vamwe vatsoropodzi vanoti Coincheck asingakoshesi multi-sig wallets, umo vakawanda makiyi inodiwa bvumidza kutengeserana, sezvo chikamu maburi akwanise kuti Hack.
Canadian simba kambani achashandisa negasi kuti cryptocurrency yangu
With negasi mitengo kutarisirwa kuramba yakaderera, mumwe Alberta mugadziri rwauya nepfungwa itsva nzira kuti vavandudze pasi mutsetse kwayo: kushandisa kwayo gasi kurwizi kuti simba kombiyuta servers kuti zvichaita kwangu angangoita mari cryptocurrencies akadai Bitcoin.
Iron Bridge Resources Ltd. akazivisa nayo aizoumba chikamu chitsva rinonzi Iron Bridge Technology vachiedza kupinda cryptocurrency uye blockchain craze - asiwo arbitrage musiyano pakati kukosha Bitcoin, Pari aikoshesa pa US $ 11.188 paminiti mari, uye AECO gasi, Pari aikoshesa pa $1.98 pa tsoka zviuru cubic.
Iron Bridge anoronga kupisa mafuta uye kubereka magetsi, uye shandisa kuti magetsi kuti simba kombiyuta Hardware mugodhi digitaalinen mari.
Vachifunga kuti 215 kilowatt maawa magetsi inodiwa kubereka mumwe Bitcoin, Iron Bridge aigona mari US $ 49 chete mcf nokuda kwayo gasi.
Ndizvo zvinopfuura 30 nguva mutengo Iron Bridge parizvino anogamuchira ayo gasi, vanozvitutumadza kuitika AECO uye Bitcoin mitengo.
"Kana toreva ndine hanyn'a, gasi ose yakaoma mugadziri ari indasitiri vanofanira kuwana amusimudze pamusoro nhau iyi, nekuti mapuranga vatungamirire vari kuenda nei makambani kugona dzitsaurire mugove okuwana dzavo ichi. "GMP FirstEnergy mutevedzeri sachigaro uye co-musoro simba rokutengesa uye zvokutengeserana Trent Boehm akati.
Blockchain News 17 Ndira 201...
Blockchain ETFs launched on NA...
akatisiyira Lumens - The Real Ethe...
PayPal Looking at Blockchain!?...
Previous Post:Chainalysis – boka kuti akaparadza kusazivana Bitcoin
Next Post:How I Kurasika Inenge 200 Bitcoin kutengesa mwedzi uyu wapfuura
Ndira 19, 2019